Iwe unogona ikozvino kutenga iyo Beats Makumi emakore Kuunganidzwa muSpain | Ndinobva mac
Takakuyambirai mazuva mashoma apfuura izvozvo kupemberera ayo ekutanga makore gumi eBeats pamusika inogona kupa yakawanda pachayo. Vamwe vanotarisira kuti Beats ichave iine mutauri akangwara akagadzirira uye kuti ichazoratidzwa nyika munaJune 4. Mutengo waro unogona kutenderera madhora mazana maviri nemakumi mashanu, mutengo unochengetedza mutengi kusvika pamadhora zana uchienzaniswa neApple yemhando yepamusoro, iyo HomePod.
Nekudaro, isu takatokuudza iwe kuti kushamisika kwekutanga kwave kuburitswa nekutanga kuvonga kune Best Buy online chitoro. Uye yaive chaiyo yakasarudzika mahedhifoni ayo anga ari vakabhabhatidzirwa Chemhondoro Inorova Makumi Gumi Unganidzo. Zvakanaka, vanogona kutove vako kuSpain kuburikidza neiyo yepamutemo Apple chitoro.
Mune ino nyowani yekuunganidza iwe unowana akati wandei mamodheru aripo. Ivo vese vari pasi peyechete yekushongedza: kusanganiswa kwemavara matsvuku uye matema uye neimwe motif yakadhindwa pane avo magadzirirwo Ivo vanoyeuka kuti akange ari makore gumi kubva pakaumbwa kambani kana kuti ivo vanopemberera yavo yegumi yegore.
Zvakare, iwo mamodheru - nemitengo yavo - yauchange uinayo ndeinotevera:
Inorova Studio3 Wireless: 349,95 euros
Inorova Solo3 Wireless: 299,95 euros
urBeats3 nemheni: 99,95 euros
urBeats3 ine 3,5 mm jack: 99,95 euros
Sezvaunogona kukoshesa, mutengo wezvinyorwa izvi haureve imwe yekuwedzera mari uchienzaniswa neyekutanga mamodheru kuti iwe unogona zvakare kuwana muCupertino online chitoro. Zvakare, sekukwanisa kwatakaita kuongorora, zuva rekuendesa remhando idzi nderekukurumidza. Sezvinotsanangurwa muApple, kuendesa kwakarongedzwa - kuita kutenga nhasi - kweinotevera June 4.
Zvino izvo mahedhifoni ari kutengeswa, chete Tinogona kuona kana Muvhuro unotevera, kubva na19: XNUMX dzemasikati. -Spanish nguva- ivo vanotishamisawo nezvimwe zvigadzirwa zvemhere zvinochengeta iyo HomePod kambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Iwe unogona ikozvino kutenga iyo Beats Makumi emakore Kuunganidzwa muSpain
McEnery Convention Center muSan José inotanga kugamuchira kushongedzwa kweWWDC